Soo dejisan BlackBerry Desktop Software 7.1.0.41 – Vessoft
Soo dejisan BlackBerry Desktop Software
BlackBerry Desktop Software – software ah si ay u maareeyaan qalabka shirkadda BlackBerry. Software The kuu ogolaanayaa inaad isku xiro qalab si aad u computer isticmaalaya Bluetooth module ama USB. BlackBerry Desktop Software ka kooban tahay qalabka si ay nuqul ka faylasha, u gudbiyaan taleefan lambarrada, gurmad, maareeyaan email iwm software wuxuu taageeraa .Wadashaqayntaas la iTunes iyo Windows Media Player, oo bixiya wareejinta cajaladood music jecel yihiin ama playlists. Si toos ah BlackBerry Desktop Software wuxuu hubinayaa ka updates of software qalabka loogu talagalay qoraalkii cusub ee internet-ka.
.Wadashaqayntaas Data dhexeeya computer ah iyo qalab
Set ka mid ah qalabka ay u soo gudbiso maamulka
Comments on BlackBerry Desktop Software:
BlackBerry Desktop Software Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Viber 6.1.1.2
Ciyaaryahan Media Phone Ciyaaryahanka caanka ah in loo maqli karo files warbaahinta. Software wuxuu taageeraa .Wadashaqayntaas xogta dhexeeya your computer iyo qalab ka Apple.
English, Українська, Français, Español... Kingo ROOT 1.4.6.2758
English, Français, Español, Português... Samsung Kies 3.2.16044.2 iyo 2.6.4.16061
العربية, English, Українська, Français... Zune 4.8.2345
English, Français, Español, Deutsch... EaseUS MobiSaver for Android 5 Free iyo Pro
Phone software The inuu ka soo kabsado xogta lumay ama si qalad ah tirtiray on the Android telefoonada, kaniini iyo SD-card gudaha qalabka.
SnapPea 2.76.0.6535 iyo 3.0.1.867 beta
One Click Root 1.0.192
Phone Tababare u telefoonada gacanta ee shirkadda Nokia. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u maareeyaan faylasha, xiriirada, fariimo iyo nidaamka xogta la your computer.
العربية, English, Français, Español... UltraVNC 1.2.1.1
Helitaanka Remote software la set badan oo ah qalab loogu talagalay maamulka dhameystiran oo ka mid ah kombiyuutarada fog adigoo isticmaalaya shabakadaha maxalliga ah ama caalamiga ah.
English, Українська, Français, Español... Free Screen Video Recorder 3.0.37.610
Qabashada Screen Qalab Compact in ay qabsadaan ee video kale iyo sanamyo ka shaashadda. Software wuxuu kuu ogol yahay in lagu badbaadiyo faylasha video qaab AVI iyo qabsadaan screenshots ee shaashad buuxda.
Opera 38.0.2220.41, 39.0.2256.9 beta iyo 40.0.2296 dev